Kenya avy amin'ny Safe Travels hampiato ny dia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kenya » Kenya avy amin'ny Safe Travels hampiato ny dia
Fitsangatsanganana any Kenya
Kenya dia iray amin'ireo firenena voalohany izay nekena ho an'ny Safe Travels Stamp avy amin'ny World Travel and Tourism Council (WTTC) sy ny Safer Tourism Seal nataon'ny World Tourism Network (WTN).
Miaraka amin'ny fanamarinana fitsangantsanganana azo antoka roa miantoka ny firenena, i Kenya dia voatery hametraka fameperana vaovao eo noho eo.
Ity onja fahatelo an'ny COVID-19 ity dia manana isan'ireo tranga isan'andro ary ny tahan'ny fisondrotan'ny PCR dia efa mihoatra ny tampon'ireo onja teo aloha.
Ny hopitalim-panjakana sy tsy miankina any Nairobi dia nitatitra ny COVID-19 feno ny farafara fandriana ary mety ho sarotra ny miaro ny oksizenina mamonjy aina.
Rehefa nitana eran'izao tontolo izao ny coronavirus COVID-19, dia nivoaka ny World Travel & Tourism Council (WTTC) niaraka tamin'ny Safe Travels Stamp. Ity hajia fankatoavan'ny fikambanana ity dia noforonina mba hahitan'ny mpandeha ny toerana itodiana sy ny orinasa eran'izao tontolo izao izay nandray ny SafeTravels protokolon'ny fenitra manerantany.
Androany, ny fitsangatsanganana any Kenya dia misongadina ihany koa fa tsy mbola resy io virus io, na dia toa ny fahitana azy aza izany indraindray. Tsy ny iray ihany fa ny fanamarinana fitsangatsanganana roa azo antoka manohana ny firenena, ny firenena izao dia voatery hametraka ireto fameperana manaraka ireto, mikatona ny vaky vonjy maika toy ny firenena maro hafa, anisan'izany i Alemana.
Araka ny tranonkalan'ny masoivoho amerikana any Kenya, noho ny fiakaran'ny vidin'ny COVID-19 izay miakatra haingana dia misy ny fameperana vaovao mahomby eo noho eo. Amin'ity onja fahatelo an'ny COVID-19 ity dia efa mihoatra ny tampon'ireo onja teo aloha ny isan'ireo tranga isan'andro sy ny taham-pivoaran'ny PCR.
Ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia namoaka fampandrenesana fitsangatsanganana ambaratonga 4 ho an'i Kenya. Ny famindrana ny virus coronavirus any Kenya dia miely sy mihazakazaka haingana. Ireo hopitalim-panjakana sy tsy miankina any Nairobi dia nitatitra fa feno ny toerana fandriany COVID-19. Oksizenina mamonjy aina dia mety ho sarotra ny hiarovana azy.
Tamin'ny 26 martsa, nanambara fameperana hafa ny filoha Kenyatta ho setrin'ny fihomboan'ny valanaretina COVID-19. Ny fameperana dia mifantoka amin'ny kaonty 5 nambara ho "faritra voan'ny aretina" - indrindra ny Kaisirin'i Nairobi, Kajiado, Machakos, Kiambu, ary Nakuru (ireo "faritany dimy").
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina, miasa any amin'ny Côte d'Ivoire izao ary naneho ny ahiahiny momba ny toe-javatra any Kenya. Nampitandrina izy fa tsy tokony hamoha ny fizahan-tany haingana loatra ny firenena fa hifantoka amin'ny fivezivezena isam-paritra na an-toerana kosa.
Juergen Steinmetz, filohan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, dia nilaza hoe: “Tsy irery i Kenya. Ny onja fahatelo dia manafika ny ankamaroan'ny Eropa, Brazil, ary ny faritra sasany any Etazonia koa. ny Hon. Najib Balala dia nahazo ny toeran'ny Maherifo ary dia fantatra fa mametraka fiarovana noho ny tombontsoa ara-toekarena. Tsy azo vinavina fotsiny io virus io, ary manao ny mety amin'ny olony i Kenya amin'izao fotoana izao.
"Amin'ny alàlan'ity karazana fisorohana ity dia hiseho lehibe kokoa hatrany i Kenya eo amin'ny sehatry ny fizahantany manerantany."
Tao amin'ny lahateny iray androany, ny Hon. Hoy i Najib Balala tamin'ny Kenyana namany: Ny fotoana farany nitenenako taminareo tamin'ny areti-mifindra COVID-19 dia ny zoma 12 martsa tamin'ity taona ity. Tsy nikasa ny hiteny an'ity raharaha ity aho raha tsy lany ny fepetra noraisinay tamin'ny 12 martsa 2021 tao anatin'ny 30 andro ka hatramin'ny 60 andro. Androany, 14 andro taty aoriana, noteren'ny porofo ara-pitsaboana sy ara-piraisana aho hamerenana ny fepetra noraisinay tamin'ny 12 martsa tamin'ity taona ity. ”
Ny fameperana vaovao navoakan'ny Masoivohon'i Etazonia any Kenya dia misy ireto manaraka ireto:
Ny hetsika WTO Aid for Trade dia manasongadina paikady fanarenana fizahan-tany
ITB Sina no hampiantrano fivorian'ny indostrialy ivelan'ny edisiona manokana